कांग्रेस ललितपुर पार्टी कार्यालय २८ वर्षदेखि श्रेष्ठको कब्जामा, फिर्ता माग्दै अदालतमा मुद्दा ! - Dainikee News::
कांग्रेस ललितपुर पार्टी कार्यालय २८ वर्षदेखि श्रेष्ठको कब्जामा, फिर्ता माग्दै अदालतमा मुद्दा !
जीवन अधिकारी /
ललितपुर,बैशाख २० । नेपाली कांग्रेसको ललितपुर पार्टी कार्यालयको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता माग गर्दै विहिबार अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । दैनिकीन्यूजले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार पार्टीका प्रभावशाली नेता ओमकार श्रेष्ठले कब्जा गरेको ललितपुर, नखिपोटमा रहेको जग्गा फिर्ता माग गर्दै ललितपुर अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदनबहादुर अमात्यले आठ आना पार्टीको जग्गा व्यक्तिले हडपेको भन्दै विहिबार जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । उनलाई जिल्ला पार्टीको बैठकले मुद्दा हाल्न अख्तियारी दिइ पठाएको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १४ नख्खीपोटमा रहेको कांग्रेसको पार्टी कार्यालयको भवन र आठ आना जग्गा नेता श्रेष्ठले आफ्नो नाममा राखेका छन् ।
कित्ता नम्बर ६१२ को आठ आना उक्त जग्गा २०४७ साल चैत ११ गते धर्म महर्जन र कृष्ण महर्जनले कांग्रेस पार्टीलाई दान दिएका थिए । तर उक्त जग्गालाई पार्टीको नाममा पास नगरी ओमकार श्रेष्ठ आँफै सभापति रहेको बेलामा आफ्नै नाममा पास गराएको दर्ता गरिएको मुद्दाको निवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यसपछि श्रेष्ठले उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन बनाउँदा स्वयं आफ्नैनामबाट फिर्ता नदिई मञ्जुरी मात्रै दिएर जग्गा आफ्नै नाममा राखेको आरोप लगाइएको छ ।
२०४७ साल चैत्र २२ गते जग्गा दाता महर्जनहरुले राजिनामा दिएपनि तत्कालिन सभापति रहेका श्रेष्ठले जग्गालाई आफ्नो नाममा पास गराएका थिए ।
अहिले व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाका कारण सरकारलाई कर तिर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसको २०६० साल साउन ३ गते भवन बनाउन नक्सा पास गरिएको थियो तर, व्यक्तिको नामबाट फिर्ता नदिइ मञ्जुरी लिइएको बताइएको छ । पटक पटक जग्गा पार्टीको नाममा ल्याउन आग्ह गर्दा पनि अटेर गरेपछि पार्टीकै सुझावको आधारमा मुद्दा हालिएको कांगेस ललितपुरले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २०, २०७५ /Thursday, May 3rd, 2018, 7:25 pm